Illaa 10-ruux ayaa la sheegay inay ku dhinteen dagaal culus oo maanta ka dhacay Xaafada Howl-wadaag ee magaalada Beledweyn – STAR FM SOMALIA
Illaa 10-ruux ayaa la sheegay inay ku dhinteen dagaal culus oo maanta ka dhacay Xaafada Howl-wadaag ee magaalada Beledweyn Gobolka Hiiraan, iyadoo dad ku dhow sodon ruuxna ay ku dhaawacmeen.
Sida ay sheegayaan wararka dagaalkan ayaa u dhaxeeyay labo maleeshiyo beeleed, waxaana uu salka ku hayay dilal iyo aanooyin qabiil.
Maleeshiyo beeleedyada dagaalamay ayaa isu adeegsaday hubka fud fudud, waxaana rasaas wiifto ah ay dhaawacday dad kala duwan goobo ka baxsan halkii lagu dagaalamayay.
Agaasimaha Isbitaalka Beledweyn Axmed Maxamed Khaliif ayaa sheegay in dhaawacyo isugu jira kuwo culus iyo kuwo fudud la keenay isbitaalka, waxaana uu xusay in afar ka mid ah dhaawacyada ay qaliin ku sameeyeen.
Odayaasha deegaanka ayaa labada dhinac ee dagaalamay ugu baaqay inay dagaalka joojiyaan, mana jirto wax war ah oo ka soo baxay Maamulka Gobolka Hiiraan oo Guddoomiyihii iyo labadiisa kuxigeen ku sugan yihiin Muqdisho.
Xaafada Howl wadaag oo ku taal galbeedka magaalada Beledweyn ayaa dhowr jeer oo hore waxaa ku soo noq noqday dagaalo u dhaxeeyay labo maleeshiyo beeleed.